Olee otú Naghachi Pictures si SanDisk CF Kaadị na Windows / Mac
Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
1 Naghachi data si dị iche iche kaadị ụdị
1.1 SD Kaadị Iweghachite
1.2 Igwefoto Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
1.3 naghachi faịlụ si dị iche iche nchekwa kaadị
1.4 Delkin Ngwaọrụ Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
1.5 PS2 Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
1.6 Mobile Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
1.7 xd Kaadị Iweghachite
1.8 Flash Kaadị Iweghachite
1.9 MMC Iweghachite
2 Naghachi data si dị iche iche na kaadị ebe nchekwa ụdị
2.1 Samsung SD Kaadị Iweghachite
2.2 Sandisk Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
Ma gụọ 2.3 Sandisk CF Kaadị Iweghachite
2.4 Eye-Fi SD Kaadị Iweghachite
2.5 Patriot Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
2.6 Kingston Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
2.7 Kingmax Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
2.8 transcend Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
2.9 Sandisk SD Kaadị Iweghachite
3 Kaadị ebe nchekwa Iweghachite n'okpuru dị iche iche senarios
3.1 Naghachi ehichapụ faịlụ site na Kaadị ebe nchekwa
3.2 Kaadị ebe nchekwa Iweghachite on Windows / Mac
3.3 Naghachi ehichapụ faịlụ site na SD Kaadị
3.4 Naghachi formatted SD Kaadị
3.5 Online SD Kaadị Iweghachite
3.6 Naghachi SD Kaadị na Windows / Mac
4 Idozi Kaadị ebe nchekwa Error
4.1 Kaadị ebe nchekwa Error
4.2 SD Kaadị bụghị formatted
4.3 SD Kaadị Error
4.4 formatted Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
5 emerụ / mebiri emebi Kaadị ebe nchekwa
5.1 mebiri emebi Micro SD Kaadị
5.2 Naghachi Photos Site emerụ Kaadị ebe nchekwa
5.3 emerụ SD Kaadị
5.4 emerụ Kaadị Iweghachite
6 Photos / videos mgbake
5.1 Naghachi ehichapụ Pictures Site Micro SD Kaadị
5.2 Naghachi ehichapụ Pictures Site SD Kaadị
5.3 undelete Photos Site Kaadị ebe nchekwa
5.4 Naghachi ehichapụ Videos si SD Kaadị
7 Kaadị Iweghachite Software
5.1 Kaadị SIM Iweghachite Software
5.2 Top 10 Kaadị ebe nchekwa Iweghachite Software
5.3 Kaadị Iweghachite Solutions
5.4 Best Kaadị ebe nchekwa Iweghachite Software
5.5 Kaadị Iweghachite VS Wondershare Data Recovery
5.8 Top 5 SD Kaadị Iweghachite Software
SanDisk CF kaadị, na obere aha SanDisk kọmpat Flash kaadị, bụ ụdị na-ewu ewu na kaadị ebe nchekwa. Jiri ya tụnyere ndị ọzọ ebe nchekwa kaadị dị ka SD kaadị, xd kaadị, MemoryStick, wdg, SanDisk CF kaadị nwere ibu size na ngwa ngwa ọsọ. Ya mere, ọ na-ọtụtụ-eji dijitalụ ese foto.
Dị ka a SanDisk CF kaadị njirimara, i nwere ike ịta nke a: na mberede ehichapụ na-adịbeghị anya foto na SanDisk CF kaadị; kaadị na-aghọ emerụ ma ọ bụ na-ajụ maka a format tupu ị nweta ya; niile foto na-na mberede na-efu, na ihe dị ka nke a. Mgbe ọ bụla nke n'elu nsogbu emee gị, adịghị-ewe iwe ma tụfuo kaadị gị. Ihe ị chọrọ ime na-ịkwụsị iji kaadị na-etinye ya pụọ. E nwere ihe a ezigbo ohere na ị nwere ike naghachi foto site na SanDisk CF kaadị na mgbake software.
Olee otú naghachi foto site na SanDisk CF kaadị
Ọ bụghị ihe niile mgbake software n'ezie ihe ọ na-agwa. Iji naghachi SanDisk CF kaadị photos, ị ga-erukwa a pụrụ ịdabere na otu. Ọ ga na-akwado SanDisk CF kaadị foto mgbake, site a ọkachamara website na-enye a free ikpe mbipute nke nwere ike inyere gị aka ego ya ọrụ mbụ. Ọ bụrụ na ị nwetara otu, i nwere ike m nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite (dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP), ma ọ Wondershare Photo Recovery for Mac. Ha abụọ bụ ndị 100% pụrụ ịtụkwasị obi na-emepụta site a ọkachamara software ụlọ ọrụ na a ọkà nkwado otu. Ị nwere ike iji ha na-agbake ehichapụ, formatted, keerughi na ndị ọzọ na-efu ihe oyiyi si SanDisk CF kaadị, nakwa dị ka ndị ọzọ na kaadị, dị ka SD kaadị. Dum ọrụ nwere ike okokụre ke 3 mfe nzọụkwụ n'agbanyeghị na ị na-na na a Windows ma ọ bụ Mac ọrụ.
Download free ikpe version nke SanDisk CF kaadị foto mgbake software n'okpuru ugbu a. Na-ahọrọ nri version maka gị usoro. Ọzọ, ka na-agbalị na Windows version ọnụ.
Naghachi niile videos & audios faịlụ na oyiyi si gị igwefoto, camcorder, kaadị ebe nchekwa, USB flash draịva na draịvụ ike ọsọ ọsọ na n'enweghị.
Miri Doppler Mode-enye gị ohere chọta na-agbake furu efu faịlụ zuru nnọọ ezu karịa ihe ọ bụla ọzọ data mgbake software
Ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface na mfe na-eji atụmatụ
Preview tupu mgbake enye gị ohere ime a nhọrọ mgbake
Akwado os: Windows 10/8/7 / XP / Vista, Mac OS X (Mac OS X 10.6, 10.7 und 10,8, 10,9, 10.10 Yosemite) auf iMac, MacBook, Mac Pro usw.
Rịba ama: Cheta ịzọpụta Doppler results ma ọ bụrụ na ị na-aga agbake hụrụ faịlụ mechara, iji gbochie data ọnwụ.
Step1 Jikọọ gị SanDisk CF kaadị na kọmputa
Jikọọ gị SanDisk CF kaadị na kọmputa na a kaadị agụ, ma ọ bụ na jikọọ gị igwefoto na kaadị na-eji a dijitalụ USB. Mgbe ahụ ẹkedori SanDisk CF kaadị mgbake software na-amalite ọrụ gị na ịpị "Malite" ke akpan window.
Step2 iṅomi furu efu foto gị SanDisk CF kaadị
Ọzọ, gị SanDisk CF kaadị ga-apụta dị a mbanye akwụkwọ ozi. Họrọ ya na-anọgide na-"iṅomi", ịchọta furu efu photos na ya.
Step3 Preview na-agbake Foto ndị dị na SanDisk CF kaadị
Doppler ga-ewe gị a mgbe. Mgbe ya, ị ga-enweta a Doppler N'ihi nwere niile furu efu photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ. Ịnwere ike ihuchalu ndị photos otu otu na "Naghachi" ha niile na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị mbụ SanDisk CF kaadị ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke Sandisk CF kaadị foto mgbake
Olee otú Naghachi Photos si a SanDisk Kaadị ebe nchekwa
Olee otú naghachi faịlụ site Sandisk USB Flash Drive
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si HTC Rezound
WD Ihe Iweghachite: Olee naghachi WD Ihe Data
Ndenye Format Iweghachite: Olee otú naghachi faịlụ mgbe Quick Format
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site egweri biini
System Weghachi - Ndi System Weghachi Hichapụ Files?
Yosemite Data Recovery - naghachi Echefuola Data si Yosemite
Olee otú iji weghachite ehichapụ Text Ozi (Android & iOS)
Wepu Mkpofu Efu: Wepu bupụrụ Mkpofu na Mavericks
Olee otú usoro Sandisk SDXC Kaadị Iweghachite
Oké mkpa M4 Data Recovery: Olee naghachi Data si oké mkpa M4 SSD
HFS Data Recovery - Get Back Data si HFS File System
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Pictures si SanDisk CF Kaadị na Windows / Mac